Iindaba zesiXhosa, 29 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 29 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 29/03/2019
Imbizo ka Bheki Cele kweli leKapa
Kulindeleke ukuba umphathiswa wenkonzo yesipolisa kwilizwe loMzantsi Afrika unjengele Bheki Cele abambe Imbizo yabahlali eThembalethu eGeorge kuMazantsi eKapa namhlanje. Le mbizo ijoliswe ekuphuhliseni ukusebenza kwamapolisa kula mandla nasekuqiniseni amatyathanga phakathi kwawo nabahlali. UNdosi ebetyelele lo mmandla ebutsheni bale nyanga waza wathembisa ngokubuyela kwakho khon’ukuze kubanjwe indibano yokunikzezela ngeempendulo emva kokunxibelelana namaseben ahlukeneyo malunga nolwaphulo-mthetho. Umphathiswa uvakalise inkxalabo malunga nolwaphulo-mthetho oluquka ubugewu nokuxhatshazwa kweziyobisi kwiindawo zoogob’ityholo.
Ibekiwe imini yoVoto yi-IEC
Azakutyikitya isivumelwano semigomo yendlela yokuziphatha yekomishoni ezimeleyo yolonyulo yeli lizwe, amaqela ezopolitiko kwiphondo leNtshona Koloni ukulungiselela ulonyulo jikelele lwalo nyaka lukazwelonke kwakunye namaphondo. I-IEC ithi le migomo yokuziphatha ibophelela amaqela ezopolitiko kwakunye nabagqatswa abangenele ulonyulo kwaye kufuneka la maqela ankqangaze esidlangalaleni ekhalimela izenzo eziphazamisana nolonyulo olukhululekileyo nolungenamkhethe khon’ukuze kwakheke umoya wonyamezelwano nokukhankasa okukhululekileyo ndawonye neengxoxo-mpikiswano zasesidlangalaleni ezithe gabalala. Abemi beli lizwe bazakuvota ngomhla wesibhozo kwinyanga kaCanzibe.
Jazz Festival iyaqhuba namhlanje
Ngamawaka-waka abathandi bomculo ekulindeleke ukuba bangungelane kumbindi wesixeko seKapa ngokuhlwa kwanamhlanje besiya kujuxuza kumxhamsholo womculo womngqungqo okwinqanaba lehlabathi i-Cape Town International Jazz Festival. Lo mnyhadala uzakubanjwa namhlanje nangomso kwaye zingaphezu kwamashumi amane iimvumi ezizakube zitshitshiselana ngeqonga kananjalo kuzakunikwa imbeko nakwigqalangqa lomculo we-Jazz kwilizwekazi i-Afrika u-Oliver Mtukudzi ongasekhoyo. Ngorhatya lwanamhlanje izakukhwela eqongeni i-Soweto Gospel Choir,imvumi yaseMelika uChaka Khan kwakunye negqala uSteve Kekana kwiqonga i-Kippies. Ukanti ezinye iimvumi ziquka odumileyo, uShekhinah kwiqonga i-Bassline. Ngomso abathandi bomculo bazakube besonwatyiswa nguDon Laka,uJonathan Butler, neGypsey Kings.
Kubonakala ngathi akhomntu uzokuphoswa yiNdumezulu yalonyaka
Sisekumyhadala njalo, bayagilana abathandi bomculo wokholo befunzele ukufumana tanci amatikiti omyhadala wokholo oququzelelwa liziko losasazo lasekuhlaleni elizinze eLitha Park eKhayelitsha i-Zibonele fm. Kulindeleke ukuba igcwale iphuphume ityalike i-Shekinah Ministries apho izakube ibanjwe khona Indumezulu Gospel Show yalo nyaka nalapho kutsalwe khona oophopho kumculo wokholo kwakunye negqala kwezosasazo uMphuthumi Putco Mafani njengomphathi-theko ebambisene nentwazana uTabita Busani ongumsasazi wodumo eZibonele fm. Le ngxikela yomculo wokholo izakube ingomhla weshumi elinesithathu kule iphezulu.
Khawugcine izibane zilayitiwe
Iqela leDA lihlab’ikhwelo kubahlali ukuba bazibandakanye nalo kwiphulo losuku lwentshukumo yakhe wonke ummi weli lizwe phantsi kwesihloko se-hashtag ethi: #KeepTheLightsOn nto leyo ithi ‘GcinaIzibaneZikhanyisile. Eli qela lithi abahlali mabathabathe amanyathelo akhawulezileyo okwenza iinguqu kwicandelo lezamandla khon’ukuze bangaphindi bazibhaqe besebumnyameni ngenxa kacimi-cimi wombane. I-DA izakwenza iintshukumo kuwo alithoba amaphondo eli lizwe nalapho inkokheli yalo kuzwelonke umnumzana Mmusi Maimane azakukhokela umngcelele ngaphandle kwezakhiwo zomdibaniso ePitoli. Ukanti eKapa kuzakubanjwa iingxoxo malunga nocimi-cimi wombane eTafelsig eMitchell’s Plain emvakwemini yanamhlanje. Umgqatswa weDA kwisihlalo sokuba yinkulumbuso yeli phondo leNtshona Koloni umnumzana Alan Winde uzakuzibandakanya nolutsha lweli qela bashukuxe ifuthe lolwaphulo-mthetho ekuhlaleni.
Uthi uzimisele ukunika ubungqina
obuyinyaniso emsulwa malunga nobudlelane bakhe negosa elongameleyo eBosasa
umnumzana Gavin Watson kwakunye nosapho lwakhe, umphathiswa wezokusingqongileyo
kuzwelonke okwalilungu lesigqeba esiphezulu seANC unkosazana Nomvula Mokonyane.
Oku kulandela izityholo ezenziwe ngowayefudula eyintloko yezemisebenzi eBosasa
umnumzana Angelo Agrizzi ngethuba ephambi kwekomishoni kaZondo, zokuba rhoqo
ngenyanga le nkampani ibifumbathisa uMokonyane ngesinyobo samawaka angamashumi
amahlanu eerandi. Kungokunje uMokonyane ufuna ukukhwela eqongeni khon’ukuze
ahlambe igama lakhe nalapho kwikhasi lakhe likaTwitter athe uzimisele
ukubhetsisa inyaniso malunga nobudlelane bakhe nolu sapho.